8 Faa'iidooyinka Caafimaadka Phenomenal Caafimaadka Iyadoo La Cunaayo Saliida Saytuun | Saliidda saytuunku ma caafimaad qabtaa?
8 Faa'iidooyinka Caafimaadka Phenomenal Caafimaadka Cunista saliidda saytuunka
30 / 03 / 2017 /0 Comments/i Cuntada iyo Cunnada, tayada Articles/av waxyeelladayda
Ma jeceshahay saliid saytuun ah? Saliida saytuunka, gaar ahaan saliida saytuunka ee bikradda ah ee dheeraadka ah, waxay la yaab ku tahay caafimaadka jirka iyo maskaxda! Saliida saytuunku waxay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo cilmi-baaris la xaqiijiyey oo aad waxbadan ka sii akhriyi karto halkan. Waxaan rajeyneynaa inaad ku qanacday inaad ku darto saliidadan cajiibka ah cuntadaada. Ma haysaa wax fikrad ah? Adeegso sanduuqa faallooyinka ee hoose ama kanyaga Facebook Page - haddii kale xor u noqo inaad la wadaagto boostada qof jecel saliida saytuunka.
Sheekada ka dambaysa saliida saytuunka
Saliida saytuunka waa saliida dabiiciga ah ee laga soo saaro saytuunka. Waa qayb muhiim ah oo ka mid ah cuntada badda Mediterranean-ka waxaana lagu beeray gobolladaas muddo dheer, waqti dheer. Spain waa dalka ugu wax soo saarka badan ee saliida noocaas ah, waxaana si dhaw ula socda Griiga iyo Talyaaniga.
Cunista saliida saytuunka waxay kahortagi kartaa istaroogga
Faaligga waxaa sababa dhiig la'aan maskaxda - oo ay ugu wacan tahay xinjirowga dhiigga ama dhiig baxa. Wadamada soo koraya, istaroogga waa sababta labaad ee ugu badan ee keenta dhimashada wadne xanuunka ka dib.
Xiriirka ka dhexeeya isticmaalka saliida saytuunka iyo halista istaroogga waxaa lagu baaray daraasado dulmar ballaaran ah. Kuwani waa daraasado lagu qiimeeyay heerka ugu sarreeya ee darajada daraasadda. Sababtooda ayay aamin u yihiin; Qaadashada saliida saytuunku waxay yareyneysaa halista istaroogga iyo cudurka wadnaha (1).
Daraasad ay la sameeyeen kaqeyb galayaasha 841000 ayaa muujisay in saliida saytuunka ay tahay isha kaliya ee lagaheli karo halista khatarta istaroogga iyo cudurka wadnaha (1). Daraasad kale oo cilmi baaris ah oo lala yeeshay kaqeybgalayaasha 140000 ayaa soo gabagabeeyey in kuwa saliido saytuun ah cunnadooda cunayeen ay si aad ah hoos ugu dhacday fursada cudurka istaroogga (2)
Iyada oo ku saleysan daraasaddan caafimaad, waxaa lagu soo gabagabeyn karaa in cunidda saliidda saytuunka ay yeelan karto saameyn togan, muddo-dheer ah ee ka-hortagga xididdada dhiigga iyo cilladaha wadnaha la xiriira.
2. Saliidda saytuunka waxay yareyn kartaa calaamadaha laabotooyinka iyo arthritis
laabotooyinka waa dhibaato caafimaad oo caadi ah oo badanaaba waxay raadsadaan habab lagu yareeyo astaamaha iyo xanuunka. Saliida saytuunka waxay kaa caawin kartaa astaamaha cudurada laabotooyinka. Tani waxay badanaa sabab u tahay astaamaha anti-bararka.
Daraasado dhowr ah ayaa muujiyey in saliidda saytuunka ay yarayn karto walwalka kiimikaad ee la xiriira laabotooyinka. Wax ka yareyn kara calaamadaha qaababka arthritis-ka ee kala goysyada (3). Gaar ahaan lagu daro saliidda kalluunka (oo ay ka buuxaan Omega-3) waxaa la arkay in saliidda saytuunka ay yareyn karto astaamaha laabotooyinka. Daraasad isku-dhafan labadan waxay muujisay in kaqeybgalayaashu daraasadda ay si aad ah u yar la kulmeen xanuun wadajirka, xoojinta garaaca iyo adkeysiga subixii (4).
Warar dheeraad ah ka sii aqri: - Tani waa waxa ay tahay inaad ka ogaato Rheumatism
3. Saliida saytuunku way arki kartaayaree fursadda nooca 2aad ee sonkorowga
Cilmi baaris ayaa muujisay in saliida saytuunka ay kahortagi karto cudurka macaanka (nooca sonkorowga 2). Dhowr daraasadood oo cilmi baaris ayaa muujisay in saliida saytuunka ay saameyn wanaagsan ku leedahay xakameynta heerarka sonkorta dhiigga iyo ka hortagga iska caabbinta insulin (5).
Tijaabooyin tijaabo ah oo la xakameeyay (RCT) oo ay ka qaybgalayaashu ahaayeen 418 ayaa xaqiijiyay natiijooyinkan (6). Daraasaddan dambe, waxaa lagu ogaadey in cunnooyinka badda ee ay ku jiraan saliida saytuunka ay yareeysay fursadda nooca 2aad ee sonkorowga in ka badan 40%. Natiijooyin aad u wanaagsan!
4. Saliidda saytuunka waxay ka hortegi kartaa oo yareyneysaa fursadda kansar
Kansarka (lagu daro kansarka lafaha) waa cilad aad u xun oo saameyn ku yeelata aad u tiro badan - waxaana lagu gartaa kala-qeybsanaanta unugyada ee aan la xakamayn.
Daraasadaha cudurrada faafa waxay muujiyeen in dadka ku nool badda dhexe ay leeyihiin khatar hoose oo noocyo ka mid ah kansarka - cilmi baarayaal badanna waxay aaminsan yihiin in saliidda saytuunka ay door muhiim ah ka ciyaaraan. Waxyaabaha sare ee antioxidants waxay yareyn karaan waxyeelada oksidheer ee unugyada ay keeneen xagjirnimada bilaashka ah - taas oo la rumeysan yahay inay tahay mid ka mid ah sababaha keena hormarinta kansarka (7). Daraasado dhowr ah oo ku jira fitamiinada ayaa muujiyay taas Saliidda saytuunka ayaa la dagaallami karta unugyada kansarka (8).
Daraasado badan oo ballaadhan - daraasaadka aadanaha - ayaa loo baahan yahay si loo go'aamiyo in nafaqada iyo qaadashada saliidda saytuunka ay qayb ka noqon karaan daaweynta kansarka mustaqbalka, laakiin horeyba waxaa jiray cilmi baarisyo badan oo xiiso leh oo aagga u muuqda kuwo wanaagsan.
5. Saliida saytuunka waxay ka hortagi kartaa boogaha caloosha waxayna ilaalin kartaa caloosha
Saliida saytuunku waxay leedahay waxyaabo aad u sareeya oo ah nafaqooyin waxtar leh oo la dagaallami kara bakteeriyada waxyeelada leh jirka oo leh astaamaha anti-bakteeriyada. Bakteeriyadaas waxaa loo yaqaanaa Pylori Helicobacter - jeermis ku nool caloosha oo sababi kara boogaha caloosha iyo kansarka caloosha labadaba.
Daraasadaha 'In-vitro' waxay muujiyeen in saliid saytuun ah oo siyaado ah ay la dagaallami karto sideed nooc oo kala duwan oo bakteeriyadan ah - oo ay ku jiraan saddex nooc oo bakteeriya ah oo iska caabiya antibiyootikada (9). Daraasad bini'aadam ah ayaa muujisay in 30 garaam oo saliid saytuun ah oo dheeri ah maalin kasta muddo 2 toddobaad ah ay la dagaallami karto ilaa 40% infekshannada Helicobacter pylori (10).
6. Saliida saytuunku waxay hagaajin kartaa shaqada maskaxda waxayna ka hortagi kartaa cudurka Alzheimers
Cudurka Alzheimer waa cudurka ugu caansan ee neurodegenerative adduunka. Tani waxay sabab u tahay tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah oo ku dhex jira unugyada maskaxda - taas oo lala xiriiriyay heerar sare oo wasakheyn ah iyo qiiqa hawada, iyo waxyaabo kale.
Daraasad xayawaan ayaa muujisay in maadada ku jirta saliida saytuunka ay ka saari karto huurada noocaas ah unugyada maskaxda (11). Daraasad kale oo bini aadam ah ayaa soo gabagabaysay in cunnooyinka ay ka midka yihiin Mediterranean ka oo ay ku jiraan saliida saytuunka ay saameyn fiican ku yeelato shaqada maskaxda (12).
7. Saliida saytuunka waxaa ku jira xaddi badan oo antioxidants ah
Saliida saytuunka ah ee bikradaha ah waxaa ku jira nafaqooyin badan oo wanaagsan - sida antioxidants iyo fiitamiino. Antioxidant-ku waxay la dagaallami karaan jawaab celinta caabuqa (at si la mid ah Ibuprofen) iyo ka hortagga oksijiinta ee kolestaroolka dhiigga ku jira - taas oo iyaduna horseedi karta yareynta halista cudurka wadnaha (13).
8. Saliida saytuunka waxay kahortagi kartaa cudurada wadnaha
Cudurka wadnaha waa sababta ugu weyn ee dhimashada. Cadaadiska dhiiga ee aan caadiga aheyn waa mid ka mid ah sababaha ugu halista badan ee cudurka wadnaha iyo geeri dhicis ah.
Daraasado waaweyn ayaa muujiyey in ku cunista saliida saytuunka ee cunnadu ku jirto badda Mediterranean ay yareynayso fursadda cudurka wadnaha (1). Cilmi baaris ayaa sidoo kale muujisay in saliida saytuunka ay hoos u dhigi karto baahida cadaadiska dhiigga ee hagista dawooyinka illaa 48% (14).
Dooro nooca saxda ah ee saliidda saytuunka!
Waa muhiim inaad doorato nooca saxda ah ee saliida saytuunka; kuwaas oo saliid saytuun ah oo bikro ah oo dheeraad ah. Tani waa mid aan la sharixin, laguma qarin, kuleylka lama daweeyo sidaasna wali waxay ku jirtaa dhammaan nafaqada wanaagsan.
Saliida saytuunka ayaa u badan dufanka ugu caafimaad badan ee jira. Kuwani waa siddeed faa'iidooyin caafimaad oo aad u xiiso badan, dhammaantoodna leh taageerada cilmi-baarista (markaa waad ka doodi kartaa korka xitaa kan ugu xun ee Besserwizzer ee aad ogtahay!), Marka waxaa laga yaabaa inaad ku qanacday inaad wax yar ka cunto saliidda saytuunka ah ee cuntadaada? Waxaan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno boggayaga Facebook haddii aad wax ra'yi ah ka dhiibato hababka kale ee saamaynta wanaagsan leh.
Shayga khuseeya - Saliid saytuun ah oo siyaado ah:
AKHRISO: - Waxa aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Xanuunka Dhabarka!
NEW: - Hada waxaad si toos ah su’aalo u weydiin kartaa chiropractor-keena laxiriira!
Sidoo kale aqri: - 8 Faa'iidooyin Cajiib ah oo caafimaad oo cunista sanjabiisha
Xor ayaad u tahay inaad la wadaagto maqaalkan asxaabtaada, asxaabtaada iyo dadka aad taqaan. Haddii aad rabto jimicsi ama maqaal loo soo diro dukumiinti ahaan oo leh dib-u-celin iyo wixii la mid ah, waxaan ku weydiineynaa sida oo aad la xiriirtaa adigoo adeegsanaya bogga Facebook iyada. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, iska dhaaf uun nala soo xiriir - markaa waxaan kuugu jawaabeynaa sida ugu wanaagsan ee aan kari karno, gebi ahaanba waa bilaash. Haddii kale xor ayaad u tahay inaad aragto kuweenna YouTube kanaalka talo-siinta iyo jimicsi dheeraad ah.
Sawirro: Wikimedia Commons 2.0, Hal abuur caanka ah, Freemedicalphotos, Freestockphotos, Pexels.com, Pixabay iyo tabaruca akhristaha.
Ilaha / cilmi baarista
1. WHO - Ururka Caafimaadka Adduunka - Xaashida Xaqiiqda
2. Schwingshackl et al., 2014. Monounsaturated acids acids, saliida saytuunka ah iyo xaalada caafimaad: dib u eegis nidaamsan iyo falanqaynta meta-ka ee daraasaadka kooxeedka.
3. Kremer et al., 1990. Saliidda kalluunka cuntada iyo kabidda saliida saytuunka ee bukaannada qaba arthritis-ka. Dhibaatooyinka caafimaad iyo tallaalka.
4. Berbert et al., 2005. Kordhinta saliidda kalluunka iyo saliidda saytuunka ee bukaannada qaba arthritis-ka.
5. Kastorini iyo al, 2009. Qaababka cuntada iyo ka hortagga nooca 2aad ee sonkorowga: laga soo bilaabo cilmi-baaris ilaa tababar caafimaad; dib u eegis nidaamsan.
6. Salas-Salvado iyo al, 2011. Yaraynta dhacdada Sonkorowga Nooca 2 ah ee Cuntada Badda ee Badda Mediterranean-ka.
7. Owen et al., 2004. Saytuun iyo saliida saytuunka ee kahortaga kansarka.
8. Menendez et al., 2005. Oleic acid, aashito ugu weyn ee dufanka leh ee saliidda saytuunka, waxay xakameysaa muujinta Her-2 / neu (erbB-2) waxayna si isku mid ah u xoojineysaa saameynta xakameynta koritaanka ee trastuzumab (Herceptin ™) unugyada kansarka naasaha.
9. Romero et al., 2007. Firfircoonida 'vitro' ee polyphenols saliida saytuunka ah ee ka dhanka ah Helicobacter pylori.
10. Castro iyo al, 2012 - Qiimaynta ciribtirka Helicobacter pylori ee Saliid Saytuun oo Bikrad ah
11. Abuznait iyo al, 2013 - Olive-Oil-Derused Oleocanthal Enhances β-Amyloid Clearance as a Neuropatrotective Mechanism against the Alzheimer's Disease: In Vitro iyo in Vivo Daraasado
12. Martinez et al., 2013 - Cunnooyinka Mediterranean waxay hagaajineysaa garashada: tijaabada kala sooc la'aanta ah ee PREDIMED-NAVARRA.
13. Beauchamp et al., 2005 - Fytochemistry: waxqabadka ibuprofen u eg ee saliidda saytuunka ah ee bikradaha ka baxsan.
14. Naska iyo al, 2004 - Saliida saytuunka, cuntada Mediterranean, iyo cadaadiska dhiigga halbowlaha: baaritaanka mustaqbalka ee yurubiyanka Griigga ee ku saabsan kansarka iyo nafaqada (EPIC)
Sidoo kale aqri: Sidee loo siidaayaa Murqaha Murqaha ee qoorta iyo garabka!
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Olivenolje-2.jpg?media=1648573622 450 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2017-03-30 15:27:202021-08-06 09:56:128 Faa'iidooyinka Caafimaadka Phenomenal Caafimaadka Cunista saliidda saytuunka
5 Layliyo ka dhan ah Murqaha Murqaha garabka iyo Garabka 6 Faa'iidooyin Caafimaad leh oo Caafimaad leh Cunista Cunitaanka Oatmeal